DHEGEYSO-Midowga xisbiyada Soomaaliya oo soodhoweeyey dibu-habaynta gudiga doorashada. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Midowga xisbiyada Soomaaliya oo soodhoweeyey dibu-habaynta gudiga doorashada.
Luulyo 3, 2016 8:30 b 0
July 3 2016-Isbaheysiga xisbiyada qaran ee Soomaaliyeed ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kusoo dhaweeyeen dib u habeynta lagu sameeyey guddiga doorashooyinka ee somaliya ee uu dhawaan madaxweynaha somaliya magacaabay kaasoo muran badan uu ka taagnaa.
Kulan ay isbaheysigaas ku yeesheen muqdisho ayey ku sheegeen in loo baahnaa dib uhabeyntaas guddiga doorashada inkastoo ay walaac ka muujiyeen qaar kamid ah xubnaha guddigaas oo ay sheegeen inay ka tirsanyihiin xafiiska madaxda somaliya ee hada jirta.
Waxayna kulankooda ay ugu dambeyntii kasoo saareen baaq ay ku codsanayaan in mar sadexaad wax laga badelo guddigaas maadaama ay kujiraan xubno taageersan madaxda qaran ee somalia.
Arrintaani ayaa waxa ay keeni karta bey yiraahdeen in ku shubasho ay dhacdo. Hadaba Amina ladan axmed ayaa Arintaas ka wareystay gudoomiyaha xibiga midnimada qaran ee somalia yuusuf cusmaan maxamuud shimbir waxana ugu horeyn ay weydiisay waxa uu ku saabsanaa kulankoodii maanta?
DHEGEYSO-Magaalada Qardho oo siweyn looga diyaar garoobey munaasabadda ciida.
DHEGEYSO-Maamulka Degmada Shalanbood oo Daljir uga waramay weerar maanta kadhacay degmada.